Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Mba iza marina moa ity Rivo Rakotovao ity ?
Inty sy Nday: Mba iza marina moa ity Rivo Rakotovao ity ?
Raha nisy anaran’olona nalaza haingana tato anatin’ny fitondrana Rajaonarimampianina, nanomboka ny taona 2014, dia ny anaran’i Rivo Rakotovao no isan’ny voalohany. Teo koa ny anaran’i Henry Rabary Njaka, indrindra fa nandritra ny naha-talen’ny kabinetran’ny filohampirenena azy, ka nampirafesany asa tamin’ny naha-filohan’ny filankevi-pitondrana ny vondrom-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar azy koa. Fa i Rivo Rakotovao dia vitsy no tena nahalala azy. Nandritra ny naha-minisitra ny fitantanam-bola an-dRajaonarimampianina dia mpanolotsainany tao i Rivo Rakotovao. Talohan’izany, ny nahalalan’ny olona sasany azy dia izy isan’ny tompon’andraikitra tao amin’ny orin’asa Silac tany Alaotra tany ka isan’ny mpiara-niombona antoka na nanana dian-tanana niaraka tamin-dRavalomanana tamin’ny fandrobana ny tany nohajarian’ny vahoaka tany ho amin’ny tolmbontsoan’ny orin’asa “Fanamby Rice” an-dRavalomanana. Isan’ny nifamatotra aina tamin-dry zareo tany koa ny Governoran’ny Banky Foibe amin’izao fotoana, Rasolofondraibe Alain Hervé.
Na tamin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana filohampirenena tamin’ny taona 2013 ka hoe niasan’ny maro ho fampandaniana an-dRajaonarimampianina aza, dia tsy dia hita taratra loatra izany Rivo Rakotovao izany, fa raha vao lany ho filohampirenena ingahy Rajaonarimampianina , dia indro fa nanomboka nisongadina i Rivo Rakotovao. Tafiditra ho mpikambana tao amin’ny governemanta aloha izy, ary izy no olona faharoa taorian’ny Praiminisitra Kolo Roger. Dia tsy nihetsika fa tao anatin’ny governemanta hatrany izy. Izy koa no hita tampoka fa “filoha nasionalin’ny antoko Hvm, nandritra ny fampahafantarana ny fijoroan’io antoko io teny amin’ny trano fandraisam-bahinin’i Carlton”. Taty aoriana dia lasa lehiben’ny andrim-panjakana faharoa eto amin’ny tany sy ny firenena izy, dia ny Antenimioerandoholona izany. Izy izany no mandray ny asan’ny filohampirenena raha misy ny tsy fahafahan’ny filoha misahana ny andraikiny, na fametraham-pialana na fahasamponana hafa na fampitsaharana azy amin’ny asany. Efa tsy andrin’i Rivo Rakotovao mihitsy moa ny ho firosoan-dRajaonarimampianina hametra-pialana rehefa tonga ny fotoana hirotsahany hofidiana. Ankehitriny dia izay tampoka koa no nasandratra ho filohan’ny “Rodobe ho an’ny Fisandratana”. Sy ny hafa any ambadika tsy fantatra loatra any e !
Fa isan’ny tsikaritr ny maro ary tsapan’ny betsaka fa isan’ny manaratsy endrika ny fitondrana Rajaonarimampianina hatrany ampiandohany i Rivo Rakotovao. Aoka tsy hifampihatsaravelatsihy fa izay no marina. Na eo amin’ny samy mpiara-miombona antoka ao anivon’ny fitondrana na ny samy mpiara-dia ao amin’ny Hvm…. Dia ahenoana an’izany. Mainka moa fa ny olona ety ivelany. Isan’ny toetra asehon’i Rivo Rakotovao ny avonavona sy ny endrika feno fanesoana ataony isaka ny miloa-bava. Tsy mendrika ny mpanao pôlitika izany nefa dia ataony. Ny fanambanimbaniana ny hafa moa dia tandra vadin-koditra amin’io avonavona io, ka havotany lafo amin’ny andro tsy ampoiziny, izay tsy hon ela intsony izany. Maro amin’ireo mpikarama an’ady pôlitika sy mpilalao pôlitika maloto mbamin’ny te hisary zoro amin’ny fitondrana no manatona an’i Rivo Rakotovao, ary matetika, izay fankatoavana avy aminy momba ireny “mpilalao pôlitika maloto” ireny dia mahazo avara-patana sy tafaka-dapa, ary tsy misy ny volo manoa randrana hahazoan’ireny olona ireny ny tombontsoany manokana avy eo. Ny fanilikilihana an’izay tsy mitovy foto-kevitra amin’ny fitondram-panjakana tsy hahita masoandro eto amin’ity firenena iombonana ity moa dia ananan-dRakotovao Rivo traikefa manokana, ary raha nisy sampam-piofanana momba izany eny amin’ny Oniversite dia azo antoka fa ho nahazo ny mari-pahaizan’ny “Professeur agrégé” momba izany izy.
Mahaiza ihany anefa mitandrina, r’Ingahy Rivo Rakotovao, fa tsy misy mahay mandeha toy ny akoho, ange hono, fa solafaka ihany rehefa mandia sahafa e!